Jaamacadda PSU Oo Soo Kordhisey Kulliyadda Medicine iyo Barnaamijyo Casri ah.
Waxaa xalay jaamacadda Puntland State University (PSU) lagu daahfurey barnaamij Maqal iyo Muuqaal ah (PSU VIRTUAL CLASSES) oo ah casharo Muqaal ah oo la diyaariyey , kuwaas oo loogu talagay inay ka faa’ideystaan Ardayda Soomaaliyeed ee ku kula sugan dalka iyo dibadiisa .
Daahfurka barnaamijkaan ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiirka Wasaarada Waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland , Wasiir ku xigeenka Wasaarada Caafimaadka, Madaxweynaha jaamacadda PSU, Maamulka iyo macalimiinta jaamacadda, Dhakhaatiir iyo Ardayda jaamacadda PSU .
Ugu horeen waxaa halkaasi ka hadlay hormuudka kuliyada Cafimaadka Maxamuud Maxamed Xuseen oo sheegay in barnaamijkan ay soo kordhisay jaamacadda PSU gaar ahaan kuliyada barashada culuumta caafimaadka .
Faadumo Shiekh Cali oo iyadu ah Madaxa barnaamijkaan ayaa iyaguna ka warbixisay marxladaha uu soo marey barnaamijkaan iyo muhiimada uu u leeyahay ardayda soomaaliyeed ee barta culuumta caafimaadka .
Dhanka kale waxaa isna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka dhanka Waxbrashada Jaamacadda PSU Axmed Shire Axmed isagoona sheegay in loo baahan yahay in laga guuro habkii hore ee wax lagu baran jirey, jaamacadda PSU ay uguureyso habka Waxbarashada casriga ah .
Madaxweynaha jaamacadda PSU Maxamuud Xaamid Maxamed ayaa ku dhawaaqay in jaamacadda PSU ay fureyso kuliyada Barashada Dhakhtarnimada ( Faculty of Medicine ) qorshaheedan uu socdo dhawaana ay jaamacadda PSU daahfuridoonto , barnaamijkaan uu hor u dhac u yahay kuliyadaasi .
sidoo kale Waxaa halkaasi ka hadlay Wasiir ku xigeenka Wasaarada Caafimaadka Puntland Faarax Maxamed Warsame oo aad u bogaadiyey barnaamijkaan in uu yahay barnaamij la galiyey juhdi iyo waqti aad u badan si loogu faa’ideyo ardayda soomaaliyeed, ee ay haysato qabado kala duwan .
Ugu danbeyn waxaa barnaamijka daahfurey Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Puntland Abshir Aw yuusuf ciise ayaa sheegay in jaamacadda PSU ay tahay jaamacad Hal-abuur leh oo markasta la socota casriga iyo isbadala aduunka ee habka casriga ah waxbarashada .
Ujeedada barnaamijkaan ayaa ah sidii kor loogu qaadi lahaa tayada iyo aqoonta ardayda jaamacadda PSU iyo guud ahaan ardayda soomaaliyeed maadaama ay la kulmaan qabado kala duwan oo dhanka warbarshada, waxayna barnaamijka si fudud uga heli karaan khadka (INTERNET KA ) iyagoo ku si fudud ugu isticmaali kara Computer ama Mobilka .